Global Voices teny Malagasy » Tsy misy mahataitra: Mahazatra ao Shina ny Backdoors sy ny Spyware (rindrambaiko Mpitsikilo) Amin’ny Finday Avo Lenta · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Desambra 2016 6:51 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Lalàna, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Kryptowire, orinasam-piarovana, dia nahita vao haingana  fa maro ireo maodelina finday Android no nametraka rindrambaiko mitoetra mandrakizay, fantatra ho toy ny firmware, izay ampiasaina ho varavarana ambadika ( backdoor) manangona ny rakitra manokana sy saropady, ahitana ny hafatra amin'ny finday (SMS), famantarana ny toerana misy amin'ny alalan'ny finday, lisitry ny mpifandray, lisitry ny antso ary mampita izany ho amin'ny lohamilina ivelan'ilay orinasa ao Shanghai, Shina.
Tsy mila ny fanomezana alàlan'ireo mpampiasa, afaka miala amin'ny maodely fanomezandàlan'i Android ilay rafikajy. Afaka manome alàlana an'izay rehetra liana amin'ny tahirin'ny mpampiasa finday iray — ny manam-pahefana ka hatrany amin'ireo mpijirika (hackers) mpisompatra — mba hibaiko avy any lavitra miaraka aminà tombontsoa manokana ara-drafitra ary hamerina mihitsy handamina indray ilay fitaovana aza.
Noforonin'ny orinasa Sinoa Shanghai ADUPS Orinasan-Teknolojia ilay firmware. Nohamarinin'ny ADUPS ny tatitra tamin'ny fanambarana  manazava fa ”vahaolana” iray ho an'ny fangatahan'ny Shinoa mpanamboatra finday mba ”hanamarika ireo hafatra sy antso tsy iriana” io ho famaliana ny fitakian'ireo mpampiasa. Niteny izy fa ireo hafatra voangona dia hohadihadiana mba ”hamantarana ireo hafatra tsy iriana” ary ”hanatsaràna ny traikefa fampiasàna ny finday.”
Avoitran'ny fikarohana nataon'i Kryptowire fa ny torohay voahangona dia sosona fanafenana ary maro no iarovana azy ary avy eo nampitaina any amin'ny alàlan'ny ‘protocols’ tsara aro fampiasa ety amin'ny tranonkala mba ho any amin'ny lohamilina iray mipetraka ao Shanghai. Ny fampitàna izany rakitra izany dia niseho isaky ny 72 ora ho an'ny hafatra amin'ny finday (SMS) sy torohay momba ny lisitry ny antso, ary isaky ny 24 ora ho an'ireo torohay hafa azo fantarina momba ny tena manokana.
Nanazava ny ADUPS fa ilay firmware ”narafitra mba hahazatra” dia voapetraka kisendrasendra tany anatinà finday 120.000 an'ny orinasa Amerikana mpanamboatra finday, BLU Products. Raha nanasongadina ilay olana ny BLU, nanazava ny ADUPS fa tsy natokana ho an'ny finday Amerikana ilay rindrambaiko ary notsoahany tao amin'ireo finday BLU ilay rindrambaiko.
Vaovao niely be tamin'ny haino aman-jery vahiny satria ny ADUPS dia ao anatin'ireo mpamatsy FOTA (firmware over the air) lehibe indrindra erantany. Sehatra rahona ho fitantanana fitaovana finday ho anà mpampiasa mavitrika miisa 700 tapitrisa any amina firenena 200 no atolotr'ilay orinasa, izay mitovy amin'ny 70% amin'ny tsena erantany satria izy miaraka miasa akaiky amin'ny mpanao finday mora indrindra erantany ZTE sy Huawei, izay samy miorina ao Shina. Tamin'ny 2015 ihany, nahalafo finday avo lenta mihoatra ny 100 tapitrisa i Huawei.
Tsy gaga tamin'ny vaovao ireo Sinoa mpampiasa aterineto. Nivezivezy nandritra ny taona maro teo amin'ny Tanibe sy ny vondrom-piarahamonina miteny Sinoa any ampitan-dranomasina ny tatitra momba ny fisian'ny ‘spyware’ voapetraka mialoha any anaty finday vita Sinoa. Tamin'ny 2014, notaterin'ny Hong Kong Android Magazina fa ireo finday avo lentan'i Xiaomi natao ho an'ny tsena ampitan-dranomasina dia nifandray ho azy taminà adiresy IP iray tao Beijing ary voasintona daholo ny rakitra rehetra, SMS sy ireo fidirana amin'ny finday, ary rakitra lahatsary izay nampitaina nankany amin'ny lohamilina iray ao Beijing.
Tamin'ny 2015, nahatsikaritra ihany koa ny orinasa G-Data miorina ao Alemana fa 26 raha kely indrindra ireo marika finday Android no nametraka ilay rindrambaiko mpitsikilo  tany anatin'ireo finday avo lentan-dry zareo. Voatanisa tao avokoa ireo Sinoa telo mpanamboatra finday avo lenta, Xiaomi, Huawei sy Lenovo.
Ilay lalàna ‘Cybersecurity’ Sinoa nolaniana vao haingana dia nanome fototra ara-dalàna  ho an'ny tetikasa varavarana ambadika. Takian'ilay lalàna ny hitahirizan'ireo ”mpandraharaha mpitantanana fotodrafitrasa saropady momba ny torohay” ireo ”torohay manokan'ny mpampiasa sy ny rakitra ara-barotra manandanja” ao Shina.
Takian'ireo lalàna hafa ihany koa, toy ny Lalàna ho Fiarovana ny Ankizy  (mbola vakiraoka), ny orinasa mpanamboatra fitaovana mba hametraka mialoha rindrambaiko fanarahamaso amin'ireo fitaovan-tserasera sy hampifanaraka amin'ny lalàna ireo fomba fanatonana manokana hiatrehana ny fiankinandoha amin'ny aterineto, izany rehetra izany ho an'ny tombontsoan'ny fiarovana ny ankizy.
Ho fanampian'ny fanarahamaso ny rakitra manokana araka ny fitakian'ny lalàna, matetika mitroka fampiasa amin'ny Android avy amina tsena hafa tsy ofosialy ireo Sinoa mampiasa finday Android taorian'ny nialàn'i Google tao Shina tamin'ny 2010. Ireo tsena Android  ireo dia tondraky ny fampiasa misy rindrambaiko malware izay afaka mangalatra sy manodinkodina ny rakitra manokana.
Tamin'ny 16 Novambra, notaterin’ ny New York Times fa manambara ireo manampahefana Amerikana hoe tsy mazava raha toa ka maneho fitrandrahana ny rakitra manokana ho amin'ny tanjona ara-barotra io, na ezaky ny fanjakana Sinoa mba hanangonana ny mombambomba ny tsirairay.
Ho valin'ilay vaovao, maro ireo Shinoa mpampiasa aterineto no manondro ny fampiasana tafahoatra ny rakitra manokan'ny tena ary lasa fenitra ny fanarahan'ny fanjakana maso.
Efa tena zatra amin'ny famoahana ny rakitra manokana isika. Tsy raharahiantsika intsony ny mikasika izany fanarahan'ny fanjakana maso izany. Tsinontsinona isika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/12/01/92303/
 dia nahita vao haingana: http://www.kryptowire.com/adups_security_analysis.html
 Hong Kong Android Magazina : http://www.android-hk.com/news/redmi-note-detect-all-data-android-hk-17-7-2014/
 26 raha kely indrindra ireo marika finday Android no nametraka ilay rindrambaiko mpitsikilo: https://mg.globalvoices.org“http://www.infosecurity-magazine.com/news/26-mobile-phone-models/“
 fototra ara-dalàna: https://mg.globalvoices.org“https://www.hrw.org/news/2016/11/06/china-abusive-cybersecurity-law-set-be-passed”
 Fiarovana ny Ankizy: https://advox.globalvoices.org/2016/10/19/chinese-netizens-see-human-rights-violations-in-child-protection-bill/
 tsena Android: http://fanli7.net/a/caozuoxitong/android/2011/1117/143986.html